Markiona avy any Sinopesy - Wikipedia
Ny apostoly Joany sy i Markiona avy any Sinopesy, sary hosodoko amin'ny hodi-janak'ondry tamin'ny taonjato faha-11, Pierpont Morgan Library.
I Markiona avy any Sinopesy na Markiona avy any Ponto dia olona nanana ny maha izy azy teo amin'ny tantaran'ny fivavahana kristiana tamin'ny Andro Taloha tamin'ny fiafaran'ny taonjato voalohany sy ny antsasany voalohany amin'ny taonjato faha-2, izay nanao fampianarana gnostika. Mpampiasa sambo nana-karena izy ka nankany Roma tokony tamin'ny taona 140, ka tao izy dia nalaza tamin'ny falalahan-tanana loatra teo anivon'ny Kristiana tany Roma izay notarihin'ny papa Pio I, araka ny lovantsofina. Teraka tao Sinopesy (tanàna ao Torkia ankehitriny) tamin'ny taona 85 izy ary maty tamin'ny taona 160.
Naoriny tamin'ny Soratra Masina ny fampianarany ka nisaraka tamin'ny fampianarana jiosy: avy amin'ny fifanoheran'ny Lalàna jiosy sy ny Filazantsara no nanatsoahany hevitra fa misy foto-javatra roa, dia ny Andriamanitra masiaka ao amin'ny Baiboly hebreo sy ny Andriamanitra fitiavana ao amin'ny Filazantsara, ka ny Andriamanitry ny soratra kristiana no Andriamanitra ambony indrindra. Ity Andriamanitra ity dia rain'i Jesoa Kristy izay tonga mba hanafoana ny Baiboly hebreo sy ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny demiorga. Amin'i Markiona dia tsy ilay mesia nandrasan'ny Jiosy i Jesoa Kristy, ary tsy naterak'i Maria Virjina: niseho tamin'ny faha-15 taona nanapahan'ny emperora Tiberio izy fa tsy nateraka sy nitombo, ka namonjy ny olombelona tamin'ny fanavotany amin'ny alalan'ny fahafatesany. Akoatr'izany dia i Markiona no nanisy hevitra ara-kaisoratra voalohany ny teny grika hoe εὐαγγέλιον / euangélion ("vaovao mahafaly" na "filazantsara") sady namolavola "kanona" voalohany amin'ny Soratra Masina izay tsy nakambany tamin'ny Torah (Testamenta Taloha) sy izay rehetra mikasika ny jodaisma ao amin'ny literatioran'ny Testamenta Vaovao, ka nanolotra lahatsoratra voafintina avy amin'ny Evanjelin'i Lioka sy epistily folo nosoratan'i Paoly.
Nisaraka tamin'ny mpino kristiana tao Roma i Markiona noho ny fampianaram-pinoany. Nanorina ny fiangonany manokana izay nanana fandaminana matanjaka sy nifaninana tamin'ny fiangonana tao Roma izy, ka noheverin'ny mpanoratry ny "Fiangona Lehibe" ho isan'ireo mpampiana-diso (hereziarka). Nandroso indrindra tany Atsinanana, tany Mesopotamia sy tany Persia, ary koa tany Andrefana ny markionisma. Niharan'ny fanenjehana ny fiangonana markionita tamin'ny taonjato faha-4 ka rava tanteraka tamin'ny taonjato faha-5.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Markiona_avy_any_Sinopesy&oldid=978513"
Voaova farany tamin'ny 17 Desambra 2019 amin'ny 04:34 ity pejy ity.